Imimmisele yenkonzo - MP3.to
MP3 ukuba WAV
Apha ngezantsi kukho inguqulelo rough zethu amagama IsiNgesi yenkonzo kunye IsiNgesi umgaqo-nkqubo malunga nemiba yomthetho zombini kusebenza kuphela IsiNgesi
Mp3.to Imigaqo yeNkonzo
Ngokungena kwiwebhusayithi ku- https: //mp3.to , uyavuma ukuba ubotshelelwe yile migaqo yenkonzo, yonke imithetho nemigaqo esebenzayo, kwaye uyavuma ukuba unoxanduva lokuthobela nayiphi na imithetho yendawo esebenzayo. Ukuba awuvumelani nayo nayiphi na le miqathango, awuvumelekanga ukuba usebenzise okanye ufike kule ndawo. Izinto eziqulathwe kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho osebenzayo welungelo lokushicilela kunye nophawu lwentengiso.
2. Sebenzisa iphepha-mvume
Imvume inikiwe ukukhuphela okwethutyana ikopi yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiwebhusayithi kaMp3.to yokujonga okungahambelani nokuthengisa kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukuhanjiswa kwetayitile, kwaye phantsi kwelayisensi awunako:
lungisa okanye ukope izinto;
sebenzisa izixhobo kuyo nayiphi na injongo yokuthengisa, okanye nakuphi na ukuboniswa koluntu (ukuthengisa okanye ukuthengisa);
ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathwe kwiwebhusayithi kaMp3.to;
susa naliphi na ilungelo lokushicilela okanye olunye ulwazi olubhaliweyo kwizinto eziphathekayo; okanye
dlulisela izinto komnye umntu okanye 'kwisipili' izinto nakweyiphi na enye iseva.
Eli phepha-mvume liyakunqunyanyiswa ngokuzenzekelayo ukuba wophula nayiphi na kwezi zithintelo kwaye unokuyekiswa nguMp3.to nanini na. Emva kokuphelisa ukujonga kwakho ezi zinto okanye xa kupheliswa iphepha-mvume, kufuneka utshabalalise naziphi na izinto ezikhutshelweyo onazo nokuba zikwifomathi ye-elektroniki okanye eprintiweyo.
Izinto ezikwiwebhusayithi yeMp3.to zibonelelwa ngesiseko 'njengoko sinjalo'. IMp3.to ayenzi ziqinisekiso, zichaziweyo okanye zichaziweyo, kwaye ngokwenjenje iyazikhaba kwaye iyazichasa zonke ezinye iziqinisekiso kubandakanya, ngaphandle komda, iziqinisekiso ezichaziweyo okanye iimeko zokurhweba, ukulungela injongo ethile, okanye ukungaphuli mthetho wepropathi okanye okunye ukunyhashwa kwamalungelo.
Ukongeza, iMp3.to ayigunyazisi okanye yenza naziphi na izimvo malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembakala kokusetyenziswa kwemathiriyeli kwiwebhusayithi yayo okanye ngokunxulumene nezinto ezinjalo okanye nakweyiphi na iisayithi ezinxulumene nale ndawo.
Akukho meko apho iMp3.to okanye abathengisi bayo baya kuba noxanduva lomonakalo (kubandakanya, ngaphandle komda, umonakalo wokulahleka kwedatha okanye wenzuzo, okanye ngenxa yokuphazamiseka kweshishini) ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo ezikwiMp3.to's iwebhusayithi, nokuba uMp3.to okanye uMp3.to ummeli ogunyazisiweyo wazisiwe ngomlomo okanye ngembalelwano malunga nokwenzeka kolo monakalo. Ngenxa yokuba eminye imithetho ayikuvumeli ukusikelwa umda kwiziqinisekiso ezichaziweyo, okanye umda woxanduva ngenxa yomonakalo owenzekayo okanye owenzekayo, olu thintelo lusenokungasebenzi kuwe.
5. Ukuchaneka kwezinto
Izinto ezibonakalayo kwiwebhusayithi kaMp3.to zinokubandakanya iimpazamo zobuchwephesha, zokuchwetheza, okanye zokufota. IMp3.to ayiqinisekisi ukuba naziphi na izinto ezikwiwebhusayithi yazo zichanekile, zigqibelele okanye zangoku. IMp3.to inokwenza utshintsho kwizinto eziqulathwe kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo iMp3.to ayenzi ukuzibophelela ekuhlaziyeni izixhobo.
IMp3.to ayijonganga zonke iisayithi ezinxulunyaniswe kwiwebhusayithi yayo kwaye ayinaxanduva lokuqulathwe kuyo nayiphi na indawo enxibelelene nayo. Ukubandakanywa kwayo nayiphi na ikhonkco akuthethi ukuvuma nguMp3.to wesiza. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi edityanisiweyo kusemngciphekweni womsebenzisi.
IMp3.to inokuhlaziya le migaqo yenkonzo kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuba ubotshelelwe luhlobo lwangoku lwemiqathango yenkonzo.
8. UMthetho oLawulayo
Le migaqo neemeko zilawulwa kwaye zithathwa ngokungqinelana nemithetho yaseConnecticut kwaye ungenisa ngokungenakuphikiswa kulawulo olukhethekileyo lweenkundla ezikuloo Rhulumente okanye kuloo ndawo.
I-MP3 ukuya kwi-AVI
I-MP3 ukuya kwi-WMV
MP3 ukuba MPEG
I-MP3 ukuya kwi-MOV
I-MP3 ukuya kwi-DIVX
I-MP3 ukuya kwi-WEBM
MP3 ukuba MPEG-2
I-MP3 ukuya kwi-FLV
MP3 ukuba 3GP
I-MP3 ukuya kwiVOB
IMP3 ukuya kwiAV1
I-MP3 ukuya kwi-M4V
I-MP3 ukuya kwi-M3U8
I-MP3 ukuya kwi-MKV
MP3 ukuba Audio
I-MP3 ukuya kwi-M4A
I-MP3 ukuya kwi-WMA
I-MP3 ukuya kwi-AIFF
MP3 ukuba MP2
I-MP3 ukuya kwi-M4R
MP3 ukuba OGG
I-MP3 ukuya kwi-AC3
MP3 ukuba AMR
I-MP3 ukuya kwi-DTS
I-AVI ukuya kwi-MP3
DIVX ukuya kwiMP3
MPEG-2 ukuya kwi-MP3
M4V ukuya kwiMP3
M4A ukuya kwi-MP3
MP2 ukuya kwiMP3
M4R ukuya kwi-MP3
AC3 ukuya kwiMP3
4,447 Uguquko ukusukela ngo-2020!
umthetho wabucala - Imimmisele yenkonzo - Qhagamshelana nathi - Ngathi - API
Yenziwe ngu nadermx - © 2021 MP3.to
Ugqithile kumda wokuguqula wakho ngeyure enye, unokuguqula iifayile zakho zibe 59:00 okanye Sayina kwaye uguqule ngoku.
Ukuba yi-PRO kukunika ezi zinto
🥇 Akukho Ntengiso
☝ Utshintsho olungathintelwanga
🥇 Iifayile ukuya kwisiguquli se-100 Gb
🐱 Ulayini ophambili
🚀 Faka isicelo sokukhetha
☝ Ukulayishwa kweqela ukuze ukwazi ukutsala kwaye ulahle iifayile ezininzi ngexesha endaweni nganye nganye